How to manage Git Repository Server with Gitosis? – MYSTERY ZILLION Blog
Posted on December 12, 2011 by CalmHill
2 Replies to “How to manage Git Repository Server with Gitosis?”
Gitosis ကို သုံးဖူးပေမယ့် သေသေချာချာ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။ အားရင် ဒီစာက အတိုင်း ပြန်စမ်းကြည့်အုံးမယ်။ အခုတော့ bitbucket နဲ့ တော်တော် အဆင်ပြေတယ်။
ကိုယ့်အလုပ်မှာ Recovery Solution ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် Repository Server ထားလို့ကောင်းပါတယ် မဟုတ်ရင်တော့ Repository Hosting တစ်ခုခုမှာ ပိုက်ဆံပေးသုံးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ နောက်ပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်သက်သာတယ်။
Previous PostPrevious How to setupasimple Git Repository Server?
Next PostNext working with git